Porn မှထွက်ရန်ကူညီနိုင်သည့်အချက် ၅ ချက် - လှုံ့ဆော်မှု၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်မဟာဗျူဟာ - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
5 ဂရိတ်ကိုသင် Porn Quit ကူညီပါရန်ကိုးကား: Inspiration, Motivation, နှင့်မဟာဗျူဟာ
ငါတို့ရှိသမျှသည်တစ်ခါတစ်ရံလှုံ့ဆော်မှုလိုအပ်: ရွေ့လျားရရန်တင်းပါးတစ်ကန်, ဒါမှမဟုတ်သင်ကန့်သတ်ခဲ့ကြသည်ထင်သောအရာကိုအတိတ်ရွှေ့ကူညီပေးသည်အလွန်နာကျင် (သို့သော်စစ်မှန်သော) အကြံပေးချက်ကို၏အပိုင်းအစ။ ဤတွင့်လုပ်ဖို့မြော်လင့်သော5ကြီးမြတ်ကိုးကားရှိပါတယ် ...
: ခွန်အားနည်းပြတေလာ, ကြံ့ခိုင်ရေးနည်းပြအနေဖြင့်
သငျသညျအစှမျးသတ်တိနည်းပြတေလာမှာမှ ပို. ဉာဏ်ပညာကိုဖတျရှုနိုငျ http://strengthcoachtaylor.ca/ သို့မဟုတ်သူ့ကိုအားဖြင့်မှုတ်သွင်းခဲ့ငါအတွေးအခေါ်တွေအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ထုတ်စစ်ဆေး: သငျသညျဆဲ Porn မှစွဲနေအဘယ်ကြောင့်3ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာရိုးသားအကြောင်းရင်းများ
: Tim Ferriss က The Four Hour Workweek ၏စာရေးဆရာကနေ
"လိုက်တဲ့အခါဖြစ်နိုင်ခြေကျွန်မသိပ်ကို fallible သည်ထင်ရာ, သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောင်းလဲ willpower အပေါ်မှီခိုဖို့ဆန့်ကျင်အဖြစ်မကောင်းတဲ့အပြုအမူလွယ်ကူချောမွေ့သောအရာကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ "
သင်ဒီမှာက Tim ရဲ့စာအုပ် (အနည်းငယ်နဲ့အခြားအကြီးအစာအုပ်များနှင့်အတူ) ကလေး Hour Workweek ငါ၏ပြန်လည်သုံးသပ်ကိုဖတ်ရှုနိုင်သည် သင့်ရဲ့ Reboot Supercharge နှင့်တစ်ခုအားသင်သည် သာ. ကောင်း၏က Man စေမည်ဟု5စာအုပ်များ
: စတိဗ် Kamb, မလိုလားကြံ့ခိုင်ရေး၏ဖန်ဆင်းရှင်ထံမှ
သင်တဦးတည်းလေ့ကျင့်ခန်းကိုကျော်သွားသည့်အခါ "လာမယ့်လေ့ကျင့်ခန်းကိုလျင်မြန်စွာသင်၏အသက်တာ၏အရေးအပါဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်လာသည်။ တဦးတည်းလွဲချော်နေ့ကအလွန်လွယ်ကူတစ်လဖြစ်လာနိုင်သည့်တစ်ပါတ်, ဖြစ်လာနိုင်သည့်နှစ်ရက်, ဖြစ်လာသည်။ ဒါကြောင့်နှစ်ရက်တစ်တန်းတစ်ယလေ့ကျင့်ခန်းကိုလက်လွတ်ဘယ်တော့မှမ။ ဆင်ခြေမလိုချင်ဘူး။"
ဤသည်ကိုးကားဆောင်းပါးကနေ ဒါဟာကျော်အဆိုပါ **** ရယူပါ! ဒါကြောင့်ထွက်အလုပ်လုပ်အကြောင်းကိုဖွင့်သော်လည်းမလိုလားကြံ့ခိုင်ရေးဘလော့ပေါ်, တဖန်, ကအလွယ်တကူသင့်ရဲ့ reboot တိုးတက်မှုမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
: ကယ်လီ McGonigal က The Willpower ဗီဇ၏စာရေးဆရာကနေ
“ အင်အားအကြီးဆုံးသောရန်သူများ - သွေးဆောင်ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုဝေဖန်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများ။ (…) ဤကျွမ်းကျင်မှုသုံးခု - မိမိကိုယ်ကိုသတိပြုခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုဂရုပြုခြင်းနှင့်အရေးအကြီးဆုံးသောအချက်ကိုမှတ်မိခြင်း - သည်ချုပ်တည်းခြင်း၏အခြေခံဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်စာဖတ်ခြင်းအဘို့ငါကယ်လီရဲ့စာအုပ်အပေါ် အခြေခံ. ဘာဝနာအကြောင်းကိုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် wrote: သင့်ရဲ့ Reboot အာဆင်နယ်အသင်းမှာတော့လျှို့ဝှက်ချက်လက်နက်: ဘာဝနာ
: ဂယ်ရီ Wilson က, Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်၏ဖန်ဆင်းရှင်ထံမှ
"သင်သင်သည်သင်၏အသက်တာ၌အစဉ်အဆက်ကိုထပ် porn ကိုကြည့်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဟုစိတ်ကူးနှင့်အတူ OK ကိုဖြစ်ဖို့ရှိသည်။ ဒီစိတ်ကူးကိုသင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုပေးသည်သို့မဟုတ်သင်အောက်မှာစေသည်လျှင်, သင်ရသေးအတွေးအခေါ် '' Porn တစ်ခု Option ကိုမဟုတ်ပါ '' ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ "
ဤသည်ကိုးကားဤဆောင်းပါးကိုမှလာ: 10 သြဇာလိင်ကျန်းမာရေးစာရေးဆရာ မှစ. အကြံဉာဏ်: တစ်ဦးက Porn စွဲကျော်လွှားရန်ကဘယ်လို